Mumakore 10 makore, mamiriyoni mawana zvinobatsira kutora chitima! Rich minda greenery, kupenya kwemahombekombe, negomo rakajeka kumboongororwa hazvina kumbotaurwa nezvazvo mumabhurocha ekufambisa kana mablog. Kutora chitima chinhu kunonakidza, zviri nyore, uye inokwenenzvera chikwama nzira yekubva pane poindi A kusvika kunongedza B, saka havafungi kaviri, kutora chitima!
Chinhu chechipiri chikuru pamusoro pezvitima muEurope uye zvakawandisa mashandisiro avanogona kuita bhajeti. Kwete chete kune vakawanda kwazvo chipa dzakasiyana kusarudza kubva, asiwo dzisingaverengeki kutema pasi vakawanda yekufambisa. Saka kana uri uchisuwa kuti varove kuchiteshi nguva pfupi, heano mamwe mazano makuru kushandisa:
Ungave uri mudzidzi anoda kufamba kana mufambi wenguva dzose anotora chitima zuva nezuva, avete chitima anogona vanokwanisa akatema mari yakawandisa pekugara vanenge hafu. Ndiyo Zvaifadza nzira kuponesa nguva yakanyanya sezvo imi kukotsira mune rimwe guta uye padzinomuka mumwe. Ataura kuti, zvakakosha kunzwisisa mhando dzakasiyana-siyana usiku chitima pokugara.
Kurongedza yako zvokudya nokure yakachipa pashiri nzira kuenda nezvazvo. Kusiyana kufamba kwese nebhazi kana mota, kana iwe tora chitima unogona chaizvoizvo kudya wakasununguka. zvigaro Most vane muedzo-kubva patafura kana wakaiswa tafura pakati zvigaro zviviri. zvisinei, kana unofanira kutenga zvokudya zvako uye zvinwiwa parwendo rwenyu, kuti kukuvara. A kudya chitima hachisi akanyanyisa pricey uye kazhinji unogona kushanda makadhi kuti kupa discounts.
Tora A Train kuti Save-A-Rovedzai, sarudza kwaunoenda, uye tora chitima kuenda kunenge kwese kuEurope nemitengo inodhura pamusika! uye, fembera chii? Kana wawana wako chitima tikiti chete Save A Train, The Réservation kwacho kunoitwa mukati 3 maminitsi, saka kurongedza mabhegi ako uye vanakidzwe zvose kunotevera!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#husiku husiku #traveleurope chitima kufamba Mazano traveltips